Xadeynta Ganacsiga La Horumariyay
Ka Hortaga in Lacag lagugu Yeesho, gacan saddexaad La socoshada lacag bixitaanada macmiilka iyo kuwo kale oo badan.
Waxaan ka dhignaa baahiyahaaga ganacsi mudnaanta koowaad.
FXPRIMUS waxaan horumarinay hababka badbaado si aad xasillooni ugu ganacsato.
Waxaan siineynaa dhammaan macaamiishayada Ka Hortaga in Lacag lagugu Yeesho (Negative Balance Protection) (NBP) si aysan marna u dhicin wax khasaare ah oo ka badan haraaga akoonkaada.
Macaamiisha FXPRIMUS waxay ka fa’iideystaan joogitaanka buyers iyo sellers ka badan ee suuqa ku jira, ee ay bixiyaan bangiyada caalamiga ah.
FXPRIMUS waxay u hogaansan tahay dhamaan shuruudaha sharci, si madaxbanaana waa loo baadha, mid gudeed iyo mid dibadeed labada.
Akoonada la kala Soocay
Lacagaha macmiilka waxaa lagu hayaa akoono ka soocan bangiga si loo hubiyo in marwalba isha lagu hayo.
Kormeerka Qeybta Saddexaad
FXPRIMUS waxaan dejinaynaa heerar cusub oo la xiriira ilaalinta
lacagaha macmiilka anagoo iskaashi la samaynayna Boudica Client Trust Si
loola socda la bixitaanada lacagaha macmiilka. Tani waxay xaqiijineysaa codsiyada la bixitaanka macmiilka in loo fuliyo sida ugu dhaqsaha badan ee ugu macquulsan.
5 Million Caymis
Ayaa loogu daray amni ahaan, FXPRIMUS waxay soo kordhisay caymiska ilaalinta lacagaha macmiilka oo gaaraya 2.5 oo euro.
Fursado Dheeraad ah oo MT4
Kaga ganacso 120+ aaladaha maaliyadeed ah barnaamijka ugu caansan shirkadaha. laga heli karo aaladaha Windows, Mac, Android iyo iOS. MT4 WebTrader sidoo kale waa la heli karaa.